Mutengesi mutsva akaonekwa muRussia - iyo Potato System Magazine
Network vatungamiriri veSiberia Federal District neFar East (Krasny Yar Boka reMakambani, Samberi, Slata Boka reMakambani) vakabatanidza maitiro avo ebhizinesi ndokugadzira kambani nyowani, anonyora RBC. Mubatanidzwa mutsva weEastern Union unobva wapaza vatengesi gumi vepamusoro munyika.
Chinzvimbo cheGeneral Director chakatorwa naOlga Naumova, aimbova mukuru weMagnit. Akacherekedza mukubvunzurudzwa nechinyorwa ichi kuti basa rakakosha rekubata kuwana "hupfumi hwenhambo refu kune vanotora chikamu kuburikidza nemhinduro yakazara yezvinetso zvakajairika."
“Nhengo dzemubatanidzwa dzichava nehurongwa hwebudiriro hwepakati nepakati, manejimendi echikamu, mabasa ekutenga zvinhu, kuvandudza yavo yavo (private label) nekutengeserana kwepamhepo, kushambadza, mhinduro dzeIT, logistics, zvichingodaro. Uye zvakare, ivo vanoshandisa dhatabhesi yakajairika, pamwe chete kuwedzera mari yebudiriro, uye kugovana maitiro emabhizimusi akanakisa, "inonyora RBC.
Tags: "Eastern Union"chitoro
Makara epurasitiki anogona kurambidzwa muRussia
Pachave neakawanda mafrimu eFrance anogadzirwa muRussia. Pamazana zana ezviuru zvematani pagore